Daraasad: 10 sabab oo ay tahay in ragga madoow aysan u shukaansan dumarka caddaanka ah - Caasimada Online
Home Dunida Daraasad: 10 sabab oo ay tahay in ragga madoow aysan u shukaansan...
Daraasad: 10 sabab oo ay tahay in ragga madoow aysan u shukaansan dumarka caddaanka ah
Madowga iyo caddaanku waa ay isku milmayeen sannadihi ugu dambeeyey, sababtoo ah dumarka caddaanka ah ayaa soo dhoweysanayey ragga madoowga ah iyagoo xaasaskooda noqonaayey.
Si kastaba ha ahaatee, khubaro heer sarre ah oo baaritaan dheer sameeyey ayaa daaha ka qaaday in aysan aheyn inay ragga madoow shukaansadaan, la haasaawaan ama guursadaan dumarka caddaanka ah. Waxana soo bandhigeen 10 sababood oo ay u cuskan karaan.
01 – Dumarka caddaanka ah inta badan waa ay ku dhibtoodaan America marka ay yihiin marwada nin madoow ah
02 – Dumarka caddaanka ah ma heystaan taageerada qoyskooda oo ka aqbalaya inay guursadaan nin midab ahaan ka duwan.
03 – Marka la yimaado dhanka furriinka, dumarka caddaanka ah wax walba ayey ka qaadan doonaan ninka madoowga ah, waxaana ku jira caruurtiisa
04 – Dumarka caddaanka ah waxay ula dhaqmaan eeygooda si ka wanaagsan sida ay ula dhaqmaan aadanaha.
05 – Iyadoo aan waxba laga soo qaadi doonin sida akhyaar aad u tahay, dumarka caddaanka ah markasta waa ay ka baqi doonaan ragga madoowga ah.
06 – Marka ay timaado dhanka waalidnimada, dumarka caddaanka ah ma ahan kuwo akhlaaq badan, waana kuwo inta badan wax walba dhalanteed u arka.
07 – Marka ay dareento inaad dembi yar ka gashay, dumarka caddaanka ah waxay si toos ah ula xiriiri doonaan booliska si qaladkaaga lagaaga abaalmariyo.
08 – Dumarka caddaanka ah markasta dhallintu waa ay qabataa, marka loo barbardhigo dumarka madoowga ah.
09 – Dumarka madoowga ah ma lahan dulqaad ay ugu adkeystaan dhaqaale xumada soo wajihi karta ragga madoowga ah, si sahal ah haddii loo dhaho marka aad guuleysato waa ku doonayaan balse marka aad guuldarreysato uma dulqaadan karaan.
10 – Waa maxay sababta aad u shukaansan karto gabar caddaan ah marka aad heli karto walaashaada madowga ah sida Nicki Minaj?